Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitry ny fiarovam-pirenena : Hafa ny lazain’ny vavany sy ataon’ny tanany
Miainga avy any ambony hatrany ny fanomezana modely tsara tokony harahin’ny rehetra, indrindra ny eny anivon’ny andrimpanjankana sy ny sehatra isan-tokony. Nisy teny nataon’ny minisitry ny fiarovam-pirenena nanao hoe “ tsy tokony hisy intsony ny fitakiam-bola ataon’ny miaramila amin’ireny trangam-piaraha-monina any ambanivohitra ireny”. Nandritra ny fifanatrehana teo amin’ny solombavambahoaka sy ny governemanta teny Ivato ny zoma lasa teo. Tsy tongatonga ho azy izany teny nambarany izany ary nahatsiaro ho manala baraka ny fitantanany ka nametrahany tsindrim-peo manokana. Noho ny antony maro no mahatonga izany raha ny fampitahana ireo tranga niverimberina nandritra ny maha minisitra azy. Tsy sanatria manome rariny izany satria toy ny fanaovana kolikoly ihany izany fomba ratsy izany. Saingy ny tiana homarihana eto dia aloavy ara-dalàna ny “indemninté“n’izy ireny ary azo atao tsara koa ny fampiakarana .
Mivarotra aina andro aman’alina sady natao hampandry fahalemana ny tany mba iarovana ny vahoaka sy nyfananany izy ireny. Raha tsara tantana ny fitantanam-bola eny anivon’ny tafika dia tsy hisy izany kolikoly na fitarainana izany.
Nilaza hatrany ny ministra ary niezaka nanadio tena fa voaloa ara-dalàna ny tambin-karama na “indemnité” hatramin’izay fa tsy misy ny tsy voaloa. Re anefa, araka ny fitarainan’ny maro, indrindra ireo efa lasa nisotro ronono fa tsy mba nisitraka izany akoryny anjarany. Noho izany havaozy ny fomba fiasa hatreny ifotony hialana amin’ny olana rehetra izany. Tsy ny olona efa tra-pahavoazana indray no mbola hakana vola.
Tsy fantatry ny minisitra ve ny trangana kolikoly eo anivon’ny ministera tantanany? Manjaka hatrany ny fandoavana vola be mitentina valo tapitra ariary raha efatra tapitrisa ariary izany taloha izay fanohizana ny asa maha miaramila (réengagement) araka ny loharanom-baovao, ary mbola manjaka hatrany toraka izany koa ny kolikoly eo aminn’ny fikarakarana taratasy mialohan’ny fidirana mialoha eo anivon’ny tafika.